Shirkii Midowga Afrika Oo Furmay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirkii Midowga Afrika Oo Furmay
Shirkii Midowga Afrika Oo Furmay
Shirkii Ururka Midowga Afrika oo ay yeelanayaan Madaxweynayaasha wadamada ku bahoobay ururkaas oo ku yaalla qaarada Afrika ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaaladda Kampala ee caasimada dalka Uganda..
Madaxweynaha dalka Uganda oo ka hadlay furitaanka Shirka ayaa hanjabaad kulul ujeediyey kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya isagoo ka codsaday madaxda ka qaybgalaaya shirka in ay u istaagan sidii lala dagaalami lahaa.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyo mudo laba asbuuc ka hor ka dhaceen magaaladda Kampala oo ay ku dhinteen dad fara badan oo gaaraya 74-qof.
Yoweri Museveni ayaa ku baaqay madaxda wadamada Afrika in ay kala qayb qaatan dagaalka isla markaana gacan ka geystaan sidii argagaxiisada looga tir tiri lahaa qaarada Afrika.
Dhanka kale wuxuu sheegay in Dawladda Uganda ay xirtay inta badan dadkii ka qayb qaatay abaabulida qaraxyadii isla markaana ay heleen xog aad u fara badan.
Amniga magaaladda Kampala ee caasimada Uganda ayaa si weyn loo adkeeyey,waxaana lagu arkaayay wadooyinka waa weyn ciidan badan oo ku daadsan.
Madax kala duwan ayaa shirka khudbado ka jeedin doona iyadoo intiisa badan looga hadli doono xaaladda Soomaaliya.
Wefdi uu hogaaminaayo Madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa ku sugan madasha shirka laguna wado inuu khudbad ka jeediyo.
Arrimaha sida aadka ah looga hadli doono ayaa noqon doonta sidii Ciidan dheeraad ah loo diri lahaa Soomaaliya iyadoo wadamo ay ka mid yihiin Jabuuti iyo Guinea ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ciidan u diraan Soomaaliya.